DOOGEE Shoot 2 wuxuu ku kacayaa kaliya 69.99 euro bisha Maarso 9 | Androidsis
DOOGEE Shoot 2 waxay la timid dalab aan laga adkaan karin: iibin toos ah $ 69.99
DOOGEE ayaa nagaga yaabisay MWC 2017 iyadoo istaag lagu rakibayo aalado aad u xiiso badan qiimahooda lacag. Waxaan fursad u helnay inaan tijaabino taleefano kala duwan, sida kuwa DOOGEE Y6 Max 3D, hadana waxaan hada galnay daahfurka DOOGEE Rasaas 2, hal taleefan taas oo aan horay kaaga soo sheegnay taasina waxay la imaan doontaa dalab flash ah oo aad u xiiso badan.
Iyo, iyada oo loo marayo websaydhka soo-saaraha, DOOGEE waxay ku dhawaaqday dhiirrigelin runtii xiiso leh, halkaas oo aad ka iibsan karto DOOGEE Shoot 2 ee $ 69.99, marka lagu daro helitaanka Shoot 1 ee $ 109 iyo Y6 Piano oo ah $ 149.99 iyo dalabyo kale. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan iibkan tooska ah halkan guji.
Kani waa DOOGEE Shoot 2, taleefan ku habboon in laga bilaabo adduunka Android
Dareenkeenii ka dib tijaabinta DOOGEE Shoot 2 way fiicnaayeen. Jirka taleefanku wuxuu ka sameysan yahay polycarbonate, wax laga filan karo taleefanka heerka galaya, laakiin waa inaan sheegaa in dhismihiisa uu ka badan yahay mid sax ah taleefankuna uu aad ugu fiican yahay gacanta.
Waa taleefan si caddaalad ah u anfacaya oo leh dhawr qiyaastii 142.6 x 72.6 x 9.5 mm oo miisaankiisu yahay 174 garaam, samee Doogee Shoot 2 ayaa si raaxo leh loogu isticmaali karaa hal gacan. Marka laga hadlayo astaamaha farsamada, taleefanka cusub ee DOOGEE wuxuu leeyahay a afar geesle processor taas oo ku guuleysaneysa xawaare saacad ah illaa 1.5 GHz oo ay weheliso 1 GB oo RAM ah, ku filan inuu ciyaaro ciyaaro aan u baahnayn culeys muuqaal oo ballaaran.
Sus 8 GB kaydinta gudaha Waxay u muuqdaan kuwo caddaalad ah, laakiin waxaan ku ballaarin karnaa xusuusta iyada oo loo marayo kaararka kaarka micro SD-ka. Illaa iyo hadda wax walba oo caadi ah taleefanka heerka gelitaanka. Laakiin aan u gudubno faahfaahinta ugu xiisaha badan ee Doogee Shoot 2.
Ku bilaw, waxay leedahay a faraha akhristaha xagga hore, faahfaahin ku saabsan qiimihiisa. Markaa isagaa leh batari ee 3.360 Mah, kaasoo ballan qaadaya ismaamul weyn haddii aan tirino miisaanka qalabka taleefankan.
Iyo nidaamkeeda laba-geesoodka ah oo leh laba 5 kamarad oo megapixel ah oo ku yaal dhabarka, kaas oo leh tiknoolajiyad si wadajir ah loogu talagalay Huawei, DOOGEE Shoot 2 waxay ku qaadi doontaa sawirro saameyn bokeh ah runtii xiiso leh oo ka farxin doonta dadka jecel sawir qaadista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » DOOGEE Shoot 2 waxay la timid dalab aan laga adkaan karin: iibin toos ah $ 69.99
ZTE wuxuu Qirayaa Inuu Jabinayo Cunaqabateynta Mareykanka ee ka dhanka ah Iran wuxuuna bixin doonaa ku dhowaad 1.000 billion oo ganaax ah